Kala-dirista Golayaasha Deegaanka iyo Kalsoonida Shacabka | Dhamays Media Group
Haddiiba ay dhacdo saadaasha ah in la kala diro Golayaasha Deegaanka dalka Somaliland, waxa dhici doonta inay shacabka ku qaabilaan sacab iyo mushxarad ka duwan ka aroosyada lagu qaabilo ee farxadda muujisa. Shacabku waxa ay ka ducayn doonaan qalbiga. Eedda kuwan la doortay ee keliya soo kordhiyey culays dhaqaale iyo dantii guud oo si shakhsi ah loo cunay, waxa qayb ku leh dadka ka cabanaya oo waa kuwii soo doortay ee shalay markay isa soo sharaxayeen hor-yaacayey ee codka, lacagta iyo reernimada wax ku dooranayey. Ilama aha inuu jiro amaba way yartahay reerka keliya ee murrashaxiintiisa ka fikiray inay yihiin kuwa ummadda wax tari kara, laakiin aan ahayn tuug Ilaahay ay safaaradaha kala qaateen oo hore taariikhdiisa loo ogaa. Bal adigu qiyaas khaayin awood helay oo cod shacab ku fadhiya ama codka reerkooda oo aan cidna waxba isaga tirinayn. Xisaabtii Alle ayuu sugayaa oo keliya.
Duqii la Magacaabi jiray
Maayarradii uu Madaxweynuhu magacaabi jiray, waxa ay ahaayeen kuwa lala xisaabtamo oo aan iska qaadan jirin go’aan dhib ku keenaya shacabka ay maamulayaan. La xisaabtanku wuxuu keeni jiray haddii ay badato ashkatada laga qabo Maayarkaasi inuu xilka ku waayi jiray. Tiro ma leh inta Maayar lagu eryey cabasho dadweyne. Waxa aynu halkan ku xusi doonaa saddex qiso oo ku dhacay Maayarradii la magacaabi jiray iyo sida ay masuuliyadda ku ahaayeen:
Mid ka mid ah Maayarradii soo maray caasimadda Hargaysa sagaashamaadkii wakhtigii dawladdii Cigaal, Allaah ha u naxariistee, ayaa waxa dhacay inay dad shacab ahi ku dibad-baxaan dhul dan guud ahaa oo ay isku rasaaseeyeen nin la siiyey oo dhisanayey iyo nin degennaa goobta, rasaastii ayey dhawr qof ku dhaawacmeen. Dadkii ka ag-dhawaa goobta ayaa isugu soo baxay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dhibta dhacday iyo ninka goobta danta guud laga iibiyey oo xoog u adeegsanayey ka kale ee meesha degennaa. Warkii ayuu sii baahiey Telefiishankii keliya ee wakhtigaasi jiray ee Hargaysa T.V, haatan se la baxay Space Channel. Madaxweyne Cigaal, ayaa warkii daawaday, markiiba wuxuu degdeg ugu yeedhay Maayarkii, Ku-xigeenkiisii, Xoghayihii Dowlada Hoose iyo Wasiirkii Arrimaha Gudaha. Kulan dheer ka dib Madaxweyne Cigaal kumuu qancin dooddii madaxda dowladda hoose, wakhtina iskamuu lumin ee isla habeennimadii ayuu soo saaray war-saxaafadeed xilka lagaga qaaday dhammaan masuuliyiintii sarsare ee dowladda hoose. Waxaana warsaxaafadeedka lagu sheegay inay madaxdu ku kacday iska horkeen ummadeed. Subaxnnimadii ayey wargaysyadii Hargaysa ka bixi jiray qoreen “MADAXDII DHULKU GALLAAFTAY”.
Waxa kale isna jiray Maayar soo maray Caasimadda Hargaysa oo ay dad kaga dibad-baxeen, meel sariibad ah oo dan guud ahayd oo qayb ka mid ah uu gancsato si hoose uga iibiyey. Ka dibna gancsatadii ayaa dadkii lacag qaali ah kaga kiraysay. Markaasay dadkii isla sariibaddii mudaharaad ka dhigeen. Ka hor intii aanu dibad-baxu xoogaysan ayaa Maayarkii lagu wargeliyey dibad-baxa. Markaasuu orod kaga soo baxay gurigiisii, isaga oo macawistii faraqa haysta oo xidhan kabo sandal ah ayuu soo gaadhay sariibaddii. Markaasuu dadkii ururiyey isaga oo beerlaxawsanaya.
Waxaanu u ballanqaaday inuu yeeli doono siday doonayaan, basle ay mudaharaadka joojiyaan. Laba saxafi oo goobta ka ag-dhawaana wuu la heshiiyey. Sidii ayuu ku badbaaday. Marka la soo koobo labaadaa qiso Maayarradii la soo magacaabi jiray xilka qaadistoodu waxa ay ku xidhnaan jirtay cabashada iyo fal-celinta dhabta ee aan dhalanteedka ahayn ee ay shacabku soo gudbiyaan. Waxa se beddelay Gole Deegaan iyo Maayar leh waxa aan ku fadhiyaa codka reerkayga oo waxa aan doono ayaa samaynayaa. Nin baa laga hayey; ‘WADAAD WELIMAYSTA WAXA BEDDELAY WAHAABI SHAQAYSTA.’ Sidaasi oo kale Maayar laga cawdo oo la eryo waxa beddelay Maayar aan la eryi karin.
Previous: Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Daah-furtay Bilawga Diiwaangelinta Maddarasadaha Lagu Barto Qur’aanka
Next: Wax Kabaro Infekshanka Kaadimareenka/ Caabuqa Kaadimareenka